Google Play ga -ejikwa ngwa ndị ebugoro na ụlọ ahịa | Androidsis
Mbipụta ngwa na Google Play adịghị mgbagwoju anya, dika anyi gosiputara gi na ubochi ya. Nke a na-enye ohere ka ụdị ndị mmepe bulite ngwa ha na ụlọ ahịa gam akporo. Nke a bụ ihe nwere akụkụ ya dị mma na akụkụ ya na-adịghị mma, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ngwa nke àgwà dubious na ụlọ ahịa ahụ. N'ihi nke a, anyị na-arụ ọrụ na usoro ọhụụ.
A mgbe gara aga A na-emegharị usoro iwu mbipụta n'ụlọ ahịa ahụ, ma ugbu a, ha ejiri ihe ọhụrụ. Ebe ọ bụ na Google Play ga-ewebata ụfọdụ njikwa ndị ọzọ banyere ngwa a ga-ebugo na ụlọ ahịa ahụ. A fix gbochie ụfọdụ ngwa ọdịnala si bipụtara.
Ruo ugbu a, usoro ibipụta ngwa na Google Play bụ akpaka. Mgbe emechara ya, o were nkeji ole na ole tupu ngwa ahụ adịworị na ụlọ ahịa ahụ. Ugbu a nke a ga-agbanwe ka usoro a nwere ike iwe ruo ụbọchị atọ, ka e wee nyochaa ngwa ahụ.
Nyochaa a lekwasịrị anya chọpụta ma ọ bụrụ na ngwa ahụ dị mma ọ nọ n'ọnọdụ a ga-ebipụta ya na ụlọ ahịa ahụ. Yabụ anyị nwere ike ịhụ ya dị ka nzacha, nke ụfọdụ nwere ike inyere ụfọdụ ngwa aka ebipụtaghị ya na ụlọ ahịa ahụ.
Ọ bụ nnukwu mgbanwe na Google Play, ebe ha na-agbanwe agbanwe nke ukwuu na ngwa a na-ebugo. Nke a bụ ihe ha na-achọ ịgbanwe ogologo oge, yana nsonaazụ dị iche iche. Ya mere, atụmatụ ọhụrụ a nwere ike inyere ha aka igbochi ngwa ọdịnala adịghị mma ka ebugo na ụlọ ahịa ahụ.
Ọ bụghị ihe na - eme na ngwa niile, agbanyeghị na ụfọdụ ndị mmepe ga - ebugo ngwa ha na Google Play ahụla etu ha siri chere. N'ihi na, o nwere ike buru nnwale, ma na na ọnwa ole na ole ọ na-aghọ usoro maka ụlọ ahịa ngwa. Anyị na-atụ anya na ozi ndị ọzọ banyere nke a n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Play ga-ewebata njikwa ndị ọzọ maka ngwa ndị ebudatara na ụlọ ahịa ahụ
Gigantic X bụ ihe nkiri ọhụụ ọhụụ nke na-achọkarị ihe na njedebe gị